Ama-Best Pads Ashaja Amandla (Novemba. 2020) - I-Android ne-iPhone - Izesekeli
Ikusasa lilapha ngokulula kokushaja okungenantambo kwanamuhla. Iyaphumelela ngezinga elethusayo, futhi ungayithola cishe kuwo wonke amadivayisi. Ama-smartphones akamuva, ama-air air pods, noma ama-AirPods, ngisho nama-smartwatches aseqalile ukuhlanganisa ukushaja okungenantambo.
Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu kuwe ukuthi utshale imali ku-pad yokushaja engenantambo. Kodwa-ke, kunezinketho eziningi kakhulu ezididayo emakethe. Yini okufanele uyicabangele, umklamo, noma amandla? Ingabe i-iphedi yokushaja engenantamboiyahambisana? Masingakhohlwa isici sentengo. Kuningi kakhulu okufanele ucatshangelwe!
Ungakhathazeki! Lo mhlahlandlela ulapha ukukusiza uhambisane nezinto ezintsha zanamuhla! Manje usungathola ukushaja okungenantambo kunoma yimaphi amadivayisi wakho asekelayo.
Odinga ukukwenza ukufunda phansi ukubuyekeza. Lokhu kubuyekeza kuqukethe amanye amaphedi wokushaja amahle kakhulu anezici ezahlukahlukene engqondweni. Kungenzeka ukuthi uthole okuthile okulingana nokuncamelayo.
Uma uzithola uxakekile ngemuva kokubuyekezwa, kukhona umhlahlandlela womthengi wokunciphisa izinto kuwe!
Kungani Kufanele Ucabangele Iphedi Yokushaja Engenantambo?
Kunezizathu eziningi zokucabangela iphedi yokushaja engenantambo. Kufanele uqinisekise ukuthi idivaysi yakho isekela ukushaja okungenantambo kwe-Qi ngaphambi kokuthenga iphedi yokushaja. Ngaphandle kwalokho, nazi ezinye zezizathu ezenza ukushaja okungenantambo kube inketho ephoqayo:
Awudingi ukuthola intambo ye-USB bese uxhuma idivayisi njalo uma ufuna ukuyishaja. Akukho ukulengiswa noma ukuhlala okwengeziwe kwezintambo ezungeze indawo. Ngakho-ke, ungazikhethela kalula idivayisi yakho bese uyifaka ephaketheni lakho ngaphandle kokukhathazeka ngezintambo.
Njengoba kungadingeki ukuthi uxhume noma ukhiphe ngokungaguquguquki, ivimbela itheku lefoni yakho ekulimaleni ngokomzimba noma ekugqokeni nasezinyembezi. Amashaja amaningi angenazintambo afika nezindlela zokuvikela ezengeziwe nokunakekelwa ukuqinisekisa ukushaja okuphelele.
Iningi lamashaja angenantambo ayindlela enhle yokushaja ubusuku bonke. Noma ukhohlwa idivayisi yakho lapho ishaja, iningi lamapayipi wokushaja lizosika ngokuzenzakalela ukuvikela impilo yebhethri nekhwalithi yedivayisi yakho.
Ngenye indlela, ungahle ufune ukuhambisana nekusasa. Kancane kancane, ukushaja okungenantambo kuya kudlondlobala kwimikhiqizo ehlukahlukene. Maduze kuzofika isikhathi lapho ukushaja ngezintambo kuzoba ubuchwepheshe basendulo. Uma ufuna ukufunda nokuzwa ukushaja okungenantambo, manje isikhathi.
Manje, uma usuthathe isinqumo sokuthi ukushaja okungenantambo kuyindlela enhle kuwe, ake siqhubekele esigabeni esikhulu se-athikili:
Ama-Pads wokushaja ahamba phambili ahamba phambili - Ubuhle, Ububi
1. Mophie Wireless 15W Ukushaja Pad
Ubukhulu:3.43 x 3.43 x 0.13 amayintshi
Ukuhambisana:I-Universal yamadivayisi anikwe amandla i-Qi
Ukuqala kuhlu kungukushaja okunamandla amakhulu kuze kufinyelele ku-15W wokuphakelwa kwamandla, okwenza kube ngesinye sezigaba eziphambili kakhulu uma ubeka phambili amandla. Ihlanganisiwe ekwakhiweni futhi ilingana kalula cishe noma kuphi, ikakhulukazi eduze kwamanye amagajethi akho phezu kwethebulethi.
Ukuhambisana kwayo kwendawo yonke yingxenye engcono kakhulu. Uma udinga ukukhetha okuqondile ngechweba elilodwa lokushaja okungenantambo, kuyisinqumo esihle. Ungashaja izingcingo zakamuva zokushaja okungenazintambo ezine-Qi-technology. Ngokwengeziwe, kusebenza ngama-air pods, ama-earbuds, nama-smartwatches, futhi. Ngakho-ke unehabhu elilodwa lazo zonke izidingo zokushaja.
Iphedi yokushaja ehamba phambili engenantamboinomklamo obushelelezi onokubukeka kwe-suede okuncomekayo nokuhlala ngamagajethi wesimanje. Kodwa-ke, ayinikezi noma yiziphi izinzuzo ze-‘décor ’. Ngamanye amagama, uma ufuna ishaja enamandla engenantambo eyenza umsebenzi wenziwe, kuyindlela enhle ongayibheka.
Kukhona ukubuyela emuva okuncane okungenza abanye abantu bakhathazeke. Ishaja iyafudumala futhi ikhishwe ukushisa impela. Yize ingesabisi, abanye abantu bangase bangayithandi. Kungenxa yomthamo wokushaja onamandla.
Ingashaja ngekhava yeselula (kufika ku-3mm)
Idizayini ebushelelezi enokubukeka kwe-ultra-suede
15 W womthamo wokushaja ophawulekayo
Ishaja engenantambo esindayo
2. Ishaja engenantambo yeNANAMI Qi-Certified
Ubukhulu:8.6 x 5.5 x 0.7 amayintshi
Uma ufuna ishaja engenantambo egcwele izici, lapha une-NANAMI enokuvikela imisebe, ukuphepha kwebhethri, nokulawulwa kwamazinga okushisa. Ngokwengeziwe, inokutholwa kwento yakwamanye amazwe ukuvikela izingozi uma ubeka okuthile okungafanele kube kuphedi, iphutha elijwayelekile.
Inokungena okungafika ku-5mm, ngakho-ke ungaba necala ocingweni bese uphatha ukushaja idivayisi yakho. Kodwa-ke, ayisebenzi ngamacala kazibuthe noma wensimbi nezinye izinto phakathi ukuvimbela izingozi.
Ngaphezu kwalokho, isekela izindlela ezintathu zokushaja ukulingana nezidingo zedivayisi ezahlukahlukene. Ngama-AirPod namanye amadivayisi afanayo, ungasebenzisa ukushaja okungu-5W ngenkathi uxhasa i-7.5W yama-iPhones ne-10W Ye-Samsung namanye amadivayisi ahambisanayo.
Ungumkhiqizo obiza kakhulu onesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-60. Kungaba ngcono? Well, you also get a 12 izinyanga replacement waranti and 24/7 care customer! Konke lokhu kuphedi yokushaja okungenantambo egcwele izici
Kuvikela amadivayisi akho ngezici zawo
Ukuhamba-friendly futhi ezingabizi kakhulu
Izinto ezingashelelezi zokubamba kangcono kudivayisi
Kudinga i-adapter efanele ukuze isebenze ngamandla anele
Kungahle kungabi namandla kumadivayisi athile ngokushaja okungafika ku-15W
3.I-Tozo W1 Ishaja engenantambo
Ubukhulu:3.94 x 0.2 x 3.94 amayintshi
Ukuhambisana:Ama-Smartphones, ama-Tablets, nama-AirPods, ama-Earbuds
Mhlawumbe ufuna okuthile okugcwalisa isikhalazo se-premium samadivayisi akho. I-Tozo W1 iza nezinhlobonhlobo zombala nokuqedwa kokukhethwa kusuka kumnyama omnyama kuya kuvuko lwegolide. Ngakho-ke, ungakhetha le shaja uma ungumthandi wobuhle futhi unekhono lokuhlobisa.
Lesi shaja sibanzi futhi singagcwalisa izilungiselelo zendlu yakho noma zehhovisi ngokuklanywa kwayo okuhle kodwa okusebenzayo. Inephaneli yesibuko esiqinile kanye nedizayini ye-aluminium. Isibani se-LED sisebenza kahle ukukutshela uma idivayisi isilungele ukukhokhisa ukushaja noma uma ngabe idivayisi ishaje ngokuphelele.
Okubaluleke nakakhulu, ingakwazi ukuxhasa kufika ku-6 kuye ku-8mm wobubanzi uma usebenzisa amakhava weselula awugqinsi. Ngaphezu kwalokho, iphedi yokushaja ingu-5 mm ubukhulu ukushelela kunoma yiliphi iphakethe ukuze lithwaleke. Uthola ukutholwa kwento, umthetho wokushisa, nokunye okungeziwe kokuphepha.
Kukhona ukuvikelwa kwesifunda okwethusayo ukuqinisa isikhalazo se-premium sephedi ngokuqhubekayo. Ihambisa amandla afinyelela ku-10W. Kodwa-ke, ukunikezwa kwamandla kuncike ekuhambisaneni nedivayisi ne-adaptha oyisebenzisayo. Kulungile! Okuwukuphela kwento ebuyayo ukuthi ayikho i-adaptha eza nayo. Kufanele usebenzise ongumnikazi wakho.
Isikhalazo se-Premium sokufanisa i-aesthetics ngentengo engabizi
Igcwele izici nokuvikelwa kwedivayisi okunolwazi
Ijubane lokushaja eliguqukayo
Imisebenzi ekhanyayo ye-Smart LED yezinkomba
Amandla okushaja angaxega uma ungenayo i-adaptha elungile
Ukukhanya kwe-LED akulali kahle futhi kungahle kukhanye kakhulu
4. I-QI-EU 3 Esiteshini Sokushaja Okungenantambo esingu-1
Ubukhulu:5 x 1.2 x 5 amayintshi
Lula at zizinhle! Lapha uneshaja engenantambo ye-QI-EU engakuletheli ukushaja okukodwa kodwa kuze kube kumadivayisi amathathu ngasikhathi sinye. Isebenza kahle kakhulu futhi inezinzwa ezihlakaniphile ezinama-adaptha ukuhlinzeka ngokufanele ukunikezwa kwamandla ngaphandle kokuncipha.
Lapha uthola izindlela ezine zokushaja ezifanele i-Samsung, i-iPhone, i-AirPods, ama-Smartwatches, namanye amafoni anikwe amandla we-Qi wokushaja okujwayelekile. Inosayizi ofanele nendawo yokugcina amadivayisi amathathu ahlukene. Ngakho-ke, uthola idizayini efanelekile engenantambo yokushaja ngamandla.
Uma unezintambo ezinde, ungazibeka kalula ngaphansi kwemodyuli ngocingo ukuze kube lula ukwengeza. Kuza nokuvikelwa okujwayelekile njenge-over-voltage, short-circuit, nokukhokhisa ngokweqile. Ithempelesha nayo akuyona inkinga, yize ishaja amadivayisi amathathu ngasikhathi sinye.
Kuyinto yejack yayo yonke imisebenzi ongayisebenzisa ekhaya, ehhovisi, uyinike othile noma uyihambele. Ngaphandle kokushaja kathathu, kusebenza kahle futhi kunomklamo ohlangene. Okubaluleke kakhulu, uma usebenzisa i-adaptha ye-Qc 3.0, inganikeza inani lamandla elifanele kumadivayisi.
Shaja amadivayisi amathathu angenantambo ngasikhathi sinye
Ilula futhi inezinhloso eziningi
Izindlela ezine zokushaja ezihlukile
Ukushaja okujwayelekile, hhayi isivinini esikhulu
5.I-Yootech Wireless Ishaja Ibhokisi
Ubukhulu:3.19 x 3.59 x 4.48 amayintshi
Ukuhambisana:Onke amadivayisi, afaka iPixel, ama-AirPod nama-Smartwatches
Mhlawumbe ungathanda okuthile okwe-combo. Nayi i-Yootech enenhlanganisela yamashaja amabili angenazintambo, elungele ukubekwa engxenyeni ehlukile yendlu yakho noma ihhovisi. Kunemiklamo emibili ehlukene. Ishaja eyodwa yiphedi yokushaja ejwayelekile, kanti enye inokwakheka 'kokuma okufana' ukukusiza ukuthi ulandelele izinto kufoni yakho njengoba uyikhokhisa.
Le combo kungenye yokwengeza ohlwini lwamaphakethe wokushaja okungenantambo enza umsebenzi wenziwe. Lokhu kuqondile ngakho konke ukuvikelwa okujwayelekile nezici. Uthola ukushaja kwezindlela ezine nokunye okungeziwe okufanayo. Ziza nentambo ye-USB, kepha kufanele utshale imali kuma-adaptha ngokwehlukana.
Kuyisisekelo sepulasitiki se-ABS sokuqina nokumelana nomlilo. Noma kunjalo, inekhwalithi yokwakha ephezulu. Inkampani inake kakhulu ukukulethela ukungezwa kwekhwalithi kumagajethi esikhundleni sokusebenzisa izinto ezibiza kakhulu.
Masingakhohlwa ukuthi ukwakhiwa kwenza ukuthi bakwazi ukusinda kakhulu. Izintambo ze-USB zijiyile futhi ziyakwazi ukumelana nokuguga nokudabuka isikhathi eside. Lawa ma-pads wokushaja akulethela ukusetshenziswa kwezinhloso ezahlukahlukene nokusebenza okulinganiselayo noma okwenelisayo. Ngakho-ke, zisohlwini lwamashaja aphezulu angenantambo.
I-combo yenani lemali
Ilungele ukusetshenziswa kwezinhloso eziningi
Konke ukuvikelwa kokushaja okungenantambo okujwayelekile nezici
Ikhwalithi yokwakha ephezulu
Lokhu akupakishi amandla angeziwe noma ukusebenza kahle
Dinga i-adaptha ye-Qc elungile ukuze isebenze kahle
6. IZeehoo Wireless Car Ishaja
Ubukhulu:5.9 x 5.4 x 3.3 amayintshi
Ukuhambisana:Ama-Smartphones anikwe amandla yi-Qi
Manje ungathola amashaja angenantambo emotweni yakho! Kulungile! Lapha uneshaja ye-Zeeho Wireless eqinile futhi esebenza kahle kakhulu, eletha amandla afinyelela ku-15 Watt uma usebenzisa ishaja efanele. Ivumelana nezimo kakhulu, futhi ungashintsha isikhundla usuke ku-portrait uye ku-landscape nangokuphambene nalokho.
Inokubamba okuqinile futhi iza nezingalo zokubamba ifoni ngokusebenza okuzenzakalelayo. Uma usubeke ifoni kuleli cala, izingalo zizovala ukuvala ucingo. Ngakho-ke, ufika ubukise ngobuchwepheshe obuhlakaniphile emotweni yakho. Ngaphezu kwalokho, umzimba usekela ukuguquka kwama-360-degree. Kusho ukuthi ungayifaka cishe noma kuphi emotweni yakho ngaphandle kokuphazamiseka.
Ungasebenzisa ifoni yakho ngenkathi ishaja, yize izokwehlisa isivinini sokushaja. Ishaja engenantambo iyahambisana nayo yonke imikhiqizo ye-premium efana ne-Samsung, i-iPhone, ne-LG. Isebenza namanye amafoni anikwe amandla yi-qi. Noma kunjalo, ayinakho ukuhambisana noma inketho yokukhokhisa amanye amadivayisi.
Ishaja ijwayelekile futhi ingadlula ngesibaya esingu-5mm ukukulethela ukushaja ngaphandle kwenkinga. Ungakhathazeki uma ucisha imoto yakho ngocingo kwishaja. Ngeke iwise ifoni. Kuzofanele ucindezele inkinobho eseceleni ukukhulula ifoni. Ngakho-ke, ungeze ukuphepha.
Ngamazwi alula, ishaja engenantambo eyazi kahle esebenza futhi njengendawo yokuma yefoni yemoto yakho.
Ishaja engenantambo kanye nomnikazi wefoni kumklamo owodwa
Idizayini eqinile ne-360-degree view ukufaka noma kuphi
Ukushaja okunamandla kwe-15 Watt ngokuhambisana kwe-smartphone kwe-Qi kunikwe amandla
Inzima kakhulu ngenxa yemodyuli
Ayisekeli ama-AirPod noma amanye amadivayisi ngokushaja imoto
7. Isiteshi Sokushaja se-WIMO
Amandla:Iyahluka kusuka ku-2W kuye ku-15W
Ubukhulu:8.27 x 3.94 x 3.54 amayintshi
I-WIMO ikulethela ezinye ezintathu esiteshini sokushaja esisodwa kepha ngokubhekisisa okwengeziwe ekwakhiweni nasekusebenzeni kalula. Uma usithandile isiteshi sokushaja sangaphambilini kuhlu, khona-ke nakanjani uzothandana nalesi. Akungabazeki ukuthi ishaja esezingeni eliphakeme ngokunaka ukusebenziseka kalula komsebenzisi.
Unemodyuli yokusonga ezungeza i-smartwatch, isitoreji samacala e-AirPods phezulu, kanye ne-stand ye-smartphone yakho. Lokhu kushelela futhi kwenza kube lula kuwe ukuhlela nokugcina amadivayisi akho ahlakaniphile egumbini lakho noma endlini.
Okubaluleke kakhulu, ikulethela ama-watt amabili we-smartwatch, ama-watt amathathu ama-air pods, kanye nama-watts amahlanu kuya kwayishumi ama-smartphones. Kungama-ounces ayisishiyagalombili futhi kunokuhamba kahle ngobukhulu. Uthola zonke izici ezijwayelekile ukuvimbela ukushisa ngokweqile, ukushaja ngokweqile, nokujikeleza okufushane, phakathi kwezinye izinkinga.
Isiteshi esisodwa sokugcwalisa ukushaja kwedivayisi okuningi
Umsebenzi osindayo nosebenza isikhathi eside
2 Amps isilinganiso samanje
Kushibhile kakhulu futhi kulula ukuvakasha
Ayakhelwanga ukugqwala okuqinile, noma ukuthuthwa okuvamile
Udinga ishaja efanelekile yokunikezwa kwamandla amakhulu
8. I-Miromtec 2 koku-1 kokushaja okungenantambo
Ubukhulu:6.5 x 3 x 0.5 amayintshi
Ingabe ufuna ishaja engenantambo emnene ku-smartphone yakho? Bese nansi inketho enhle kakhulu yakho. IMiromtec ikulethela ishaja engenantambo eyenza ukubekwa kwesitayela samahhala. Awudingi ukulingana i-smartphone noma ukuyibeka endaweni ethile. Inqobo nje uma itheku ledivayisi yakho engenantambo lihambisana ne-matte, lizosebenza kahle.
Iphedi iza nonyawo lokushibilika, indwangu ethambile, nezimbobo zokupholisa ukugcina ukusebenza kahle. Ine-chip ehlakaniphile ukulawula ukuhamba kwamandla futhi isebenze kumadivayisi amaningi. Noma kunjalo, kufanele ubeke amadivayisi amabili ngasikhathi sinye.
Ukuvikelwa kokukhuphuka, ukulayishwa ngokweqile, ukushaja ngokweqile, isifunda esifushane, nazo zonke ezinye izinkinga kunokuvikeleka okufanele. Cabanga ngakho kanjena. Uma udinga ishaja yokunethezeka enokuhambisana okungcono nomsebenzi olula, kuyisinqumo esihle kakhulu kuwe.
Iza neshaja enamandla engu-18W
Ukushaja kabili ukushaja ama-smartphones amabili ngasikhathi sinye
Indwangu yokulwa nokushelela futhi emnene
Kushaja amakhoyili amahlanu ukubeka idivayisi noma kuphi ku-mat nokushaja
Inikeza amandla amancane kudivayisi yesibili
Kusinda kakhulu ekwakhiweni
Umhlahlandlela wabathengi wamaphedi wokushaja okungenantambo:
Into yokuqala ongafuna ukuyicabangela uhlobo lwedivayisi engenantambo onayo. Uma une-smartphone enokushaja okungenantambo, ungahle udinge okungenani ukushaja okungu-10W ukuze uvumelane nesidingo sakho samandla ngenketho efanele yokubekwa.
Kuma-smartwatches amaningi, ukushaja kwe-3W kwanele. Uma ufuna ishaja engenantambo yama-AirPods noma amanye amadivayisi afanayo, khona-ke i-5W kungaba yisinqumo esifanele. Kodwa-ke, uma unamadivayisi amaningi, khona-ke ngokungangabazeki kufanele uthole isiteshi sokushaja okungenantambo. Abathathu koyedwa noma ababili koyedwa bangaba inketho ephumelelayo.
Qiniseka ukuthi uhlolela ukuhambisana kwedivayisi kumashaja angenantambo, ungathembeli kuphela ekunikezelweni kwamandla. Amanye amashaja angahlinzeka ngokushaja okungu-10 W, kepha kuthiwani uma kungahambisani nemodeli yakamuva ye-Samsung Galaxy noma ye-iPhone? Akunangqondo uma ungatholi ishaja enobufakazi besikhathi esizayo.
2. Ukushaja Amandla
Njengoba usuthole imfuneko yamandla ejwayelekile yedivayisi ngayinye, umthamo wokushaja uhlobene kakhulu nokuthi ungakhokhisa amadivayisi amangaki ngasikhathi sinye. Enye ishaja engenantambo ingakutshela ukuthi ingashaja kuze kufike kumadivayisi amabili noma amathathu, kepha amandla kagesi angahamba kancane.
Awukwazi ukulindela izingcingo ezimbili ukushaja ngejubane elifanayo kwishaja engenantambo ngasikhathi sinye. Ngaphandle kokuthi inkampani ikunikeze isivinini. Ngisho nangaleso sikhathi, iningi lama-adaptha wamashaja angenantambo anikezela ngamandla afinyelela ku-18W. Ngakho-ke umkhawulo ongawuthola uzoba cishe u-7.5W wamafoni amabili.
3. Ukucatshangelwa kwe-USB
Ishaja engenantambo ayiyona engenantambo ngokuphelele. Yize kungadingi ukuthi ifoni yakho ibe nokuxhumeka kwentambo, udinga i-USB noma i-adaptha yephedi yakho yokushaja. Ngakho-ke, ungahle uthande ukucabangela ikhwalithi yekhebuli nobude bayo ukuqinisekisa ukuthi ihlangabezana nezidingo zakho.
4. Izici Zokuzivikela
Kufanele uthole ishaja okufanele ishise kakhulu, ishaje ngokweqile, futhi ivikele namandla kagesi. Amasekethe amafushane, amandla kagesi, nokushisa yizinto zesibili. Ukuvimbela amanzi kungaba yinto enhle futhi. Amanye amashaja angenantambo anezinzwa ezengeziwe zokuthola into yangaphandle nokusika ukushaja. Ungayibheka uma ufuna ukuphepha okungeziwe.
Ukushaja okungenantambo kusengubuchwepheshe obungalindelekile. Ungahle uthande ukunamathela kumikhiqizo eyaziwayo. Kodwa-ke, eminye imikhiqizo engaziwa kakhulu enikeza iwaranti ingaba ukukhetha okuphoqayo, futhi. Uma behlinzeka nganoma yisiphi isiqinisekiso, kusho ukuthi bayalithemba ikhwalithi. Ungaqiniseka ukuthi idivayisi izosebenza inqobo nje uma iwaranti isekhona.
Amapayipi amaningi wokushaja okungenazintambo awafiki ne-adaptha futhi akushiya ulenga. Kungadingeka ukuthi wenze imali ethe xaxa. Imvamisa, abantu abalazi uhlobo olufanele lwe-adaptha engenantambo ukuthola. Funda imininingwane noma imanuwali ngaphambi kokuthenga iphedi yokushaja engenantambo ukuze ubone ukuthi unayo i-adaptha esekelayo noma cha. Uma kungenjalo, kuzodingeka ukuthi uyithenge.
Ngokufana namanye amashaja akho, ungahle uthande ukuthola ishaja engenantambo ephathekayo noma evumelana nokuhamba. Ngalokhu, usayizi osindayo futhi ohlangene kufanele kube ukucatshangelwa kwakho okuyinhloko. Kodwa-ke, uma ufuna ukusetshenziswa kwekhaya noma kwehhovisi ngetheku noma esiteshini esinqunyelwe, awudingi ukukhathazeka kakhulu ngalesi sici.
Ekugcineni, ukwakheka, umbala nezinye izinto kwehlela kokuthandayo. Uma ufuna ishaja engenantambo ye-premium level, akufanele ucabangele inketho yentengo, nakancane. Amaphedi amaningi wokushaja ashibhile angagcina alimaze idivayisi yakho. Ngakho-ke qaphela ikhwalithi. Thenga njalo kumthombo oqinisekisiwe noma onokwethenjelwa.
1Q. Ingabe Ukushaja Okungenantambo Kungcono Kunokushaja Okunentambo?
Iminyaka:Ukushaja okungenantambo kukulethela kalula ukubeka idivayisi yakho ngaphandle kokudinga i-plug-in. Kodwa-ke, uma ukhuluma ngejubane, ukushaja okungenantambo kuhamba kancane kunokushaja kwentambo. Ungafinyelela ku-25 W ngejubane ngokushaja kwentambo kalula ngenkathi ukushaja kwentambo kunamandla wokushaja angaba ngu-15W.
Noma kunjalo, iningi lamafoni lisekela amanani wokushaja ahamba kancane. Ukushaja kwentambo kuvikelekile kepha kunokuphazamiseka kwezintambo.
2Q. Kuhlala isikhathi esingakanani amashaja angenantambo?
Iminyaka:Ukushaja okungenantambo kuyavumelaniswa namanye amadivayisi wakamuva namagajethi. Ngakho-ke, ishaja eyodwa engenantambo ingahlala iminyaka emibili kuya kwemithathu ngaphambi kokudinga enye. Noma kunjalo, kungaxhomeka nakwikhwalithi yeshaja. Uma uthenga amashaja ashibhile, ungalindeli ukuthi angahlala isikhathi eside. Kungcono ungalokothi uyekethise ngekhwalithi yamashaja angenantambo ngenxa yendlela eyinkimbinkimbi.
3Q. Ingabe Kuphephile Ukushiya Ishaja Engenantambo Ixhunywe Kumandla Okuphuma?
Iminyaka:Yebo, kuphephile ukushiya ishaja engenantambo ixhunyiwe inqobo nje uma unekhwalithi enhle yeshaja. Ezinye izinhlobo ezindala zezinketho ezingabizi kungenzeka zingaphephi kuwe ukuthi uzishiye zixhunyiwe. Noma kunjalo, iningi lazo lenzelwe ukushaja okulula ngobusuku obubodwa. Ngakho-ke, kufakazela ukuthi bavikelekile ukungena ngaphakathi.
Lapho unayo! Uhlu lweamaphedi wokushaja angenantambo! Ifaka uhla oluguquguqukayo lokuheha abantu abanezintandokazi ezahlukahlukene. Noma ngabe ufuna ukubheka isabelomali, ukuthwala, ukusebenziseka kalula, noma ukushaja okuningi, lolu hlu lunakho konke. Ngakho-ke, ukubuyekeza kwakho okukodwa kwamashaja aphezulu angenantambo atholakala emakethe.
Umhlahlandlela womthengi kufanele ukukunikeze ukubuka konke okuhle kanye nencazelo yezici ezahlukahlukene zeshaja engenantambo. Kusengumbono omusha emakethe, kepha uyabona ukuthi kwenzeka ngokuziphendukela kwemvelo okusheshayo. Qiniseka ngokukhetha okulungile kwephedi yokushaja engenantambo ohlwini.
Ama-emulators we-PC ye-PC
okuthile okuthakazelisayo ku-intanethi
bukela ama-english english movie online online mahhala
uwathola kanjani amakhodi we-pokemon
iwebhusayithi engcono kakhulu yokusakaza i-anime
bukela i-tv show iziqephu ezigcwele eziku-inthanethi